Double digit Iilahleko ayitshayele Crypto Asset Market - Blockchain News
EyoMdumba 2, 2018 admin
Double digit Iilahleko ayitshayele Crypto Asset Market
Iimarike cryptocurrency ezi lulwandle ebomvu namhlanje, nayo yonke phezulu 10 cryptocurrencies ngu cap lemarike ingxelo kabini-digit ipesenti ilahleko ngenxa wokugqibela 24 iiyure.
Bitcoin liye lehla 16 % kweli xesha linye bukhulu veki-10 ngezantsi $8,000 kwaye wolahlekelwa yobubi balo obukhulu ngeveki (engaphezulu kwe 25 %) ukusukela ngo-Epreli 2013. Le cryptocurrency ubunzima ukuhla-30 ekhulwini ngo-Januwari kwaye phantsi 45 % kwi ngonyaka-to-umhla basis.
ithokeni kaEtere Ethereum kukuba phantsi 28 %. Le cryptocurrency ebasingasingile ukumelana noko ebutsheni bale veki, ngenxa kubikwa ukuba kwemali kumaziko kunye nesigqibo Venezuela ukuba presale cryptocurrency nemichiza ye eqongeni ethereum. kunjalo, njengokubamba inkunzi ukhangela ukuba buthathaka kwaye ETH wagcina ukubonakala ukurhweba emhlabeni $785.
; Kusenjalo, Ripples kaThixo XRP ithokheni zeeteksi sesithathu kuluhlu iyivume nge 35 ekhulwini drop. Ngoku ke cryptocurrency siwile ku $0.635 - level layo liphantsi ukususela Dec. 15. Elandela isiqalo embi XRP ukuba kunyaka, nge 49 ekhulwini kuwa phakathi ngoJanuwari.
Kuko konke, ubukhulu lilonke lemarike zonke cryptocurrencies ethatyathwe kunye liye lehle ngaphezu $100 billion.
Ngakumbi yeshadi, ebetha inqaku enqabileyo entle phakathi esithokothokweni kutshatyalaliswa, ithokheni zegolide-exhaswa ogama DigixDAO (DGD) ibalasele emva kokuba ziposiwe 30 ekhulwini uzuza.
umbhali: Richard Abermann
Ikomiti ephambili A ...
Mastercard patent wo ...
Post Previous:Blockchain Observatory kunye neForam ukuba Zisa EU ukuba "Usetyenziso" of Blockchain Tech
Post Next:Blockchain ETF yokuqala Canada evunywe nabalawuli